Ukuba awukuqondi kakuhle ukujija okuncinci kunye nokujika kwikhowudi, uya kugqiba ngeebugs kwisicelo sakho. Ukuba unamathandabuzo, unokuqhagamshelana nabanye abaphuhlisi bewebhu abagcweleyo.
U-Roma Kapadiya ngumhlalutyi we-SEO kunye noMbalisi wamabali kwiNimblechapps-ainkampani yophuhliso lwe-hybridIsekwe eIndiya. Ukholelwa ekusebenziseni iindlela ezahlukeneyo zesicwangciso-qhinga sokwenza ubukho beshishini kwi-Intanethi elonwabisayo kwaye lihambise. Njengento ayithandayo, ubhala malunga netekhnoloji entsha kunye nokuza, ukuqala, izixhobo zenkqubo, kunye neshishini kunye noyilo lwewebhu. Ungamlandela kuTwitter nakuFacebook.